Maleeshiyada Khaatumo oo weerar dad ku dhinteen ka fulisay Gawsaweyne – make music movie Edition: International | Video
Published On: 20 June 2012 12:37 am Wararka | By Taleex Media Maleeshiyada Khaatumo oo weerar dad ku dhinteen ka fulisay Gawsaweyne
Maleehsiyada Khaatumo ee Axmed Karaash ayaa caawa halwgal dad rayid ah ku dhinteen ka soo fulisay tuulada Gawsaweyne oo ku dhaw degmada Xuddun ee gobolka Sool.
Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay markii hore 1 qof waxaana ku dhaawacmay 6 qof oo kale hase ahaate wararkii u dambeeyay ayaa sheegaya in 2 ka mid ah dhaawicii ay dhinteen.
Weerarka ayaa waxaa fuliyay maleeshiyaad saarnaa laba gaadhi oo nooca surf-ta loo yaqaano oo xalay ka soo baxay Taleex.
Labada gaadhi ma ahayn kuwa dagalka waxaana kala leh laba nin oo ka soo kala jeeda Xuddun iyo Jiidali wxaase gacata ku haya Axmed Karaash.
Maleeshiyadka ayaa waxa ay rasaas ooda kaga qaadeen dad reer rayid ah oo tuulada Gawsaweyne ku sugnaa waxana ay halkaa ku dileen nin waxaana ku dhaawacmay 5 kale oo 3 dumar yihiin.
Intii ay dhexda ku soo jireen ayaa waxaa ka hor yimi gaadhi kaaso ay rasaas huwiyeen waxaana ku dhaawacmay nin u dhashay beesha Ciida Gale. Marka laga reebo ninka Ciida gale dhamaan inta dhimtay iyo dhaawac ah waxaa ay ka soo jeedaan beesha Habar Jeclo.
Weerarkan ayaa dhacay maalin ka dib markii ay odayaasha Jufa ka mid ah beelaha Taleex oo Axmed Karaash martida u yahay ay diideen in Axmed Karaahs qaado weerar uu ku doonayay in lagu laayay dadka xoola dhaqatada ah ee ka soo jeeda beesha Ciise Maxamuud (Majeerteed).
Sida ay Taleex Media u sheegen qaar ka mid ah odayaahsii ka qayb galay kulnkaa waxaa uu Axmed Karaash ku wargeliyay in uu doonayo in uu qaado weerar ka dhan ah dadka reer miyiga ah ee ku nool tuulooyinka xadka la leh degmada Taleex si ayuu yidhi coolad loo dhex dhigo Garowe iyo Taleex.
Ka dib markii ay ka diideen ayaa uu Axmed u sheegay in uu ka bilaabayo degamaada beeshiisa ay degto beelaha xadka la leh ka dibna idinka aad naga aqbali doontaan ayuu yidhi mid taa la mid ah in aan ka fulino Taleex.
Ma kala cadda in odayaasha juqada reer Taleex ee Axmed Karaash gacan saarka la leh aqbali doonaan talaabo la mid ah tan caawa ay ka soo fuliyeen maleehsiyada Axmed Karaash Gawsaweyne.